तीन दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध लड्छौं : संयोजक भट्टराई « Khasokhas Follow @khasokhasmag
तीन दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध लड्छौं : संयोजक भट्टराई
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले निर्वाचन आयोगमा विधिवत रुपमा दर्ता भएको नयाँ दललाई दलीय चुनाव चिन्हबाट वञ्चित गर्ने गरी जारी भएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधनका लागि दवाव दिन आइतबार काठमाडौंस्थित निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएको छ ।
नयाँ शक्तिसहित दलीय चुनाव चिन्ह नपाएका अन्य दलहरुले संयुक्त रुपमा निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका हुन् ।
आन्दोलनकारी र प्रहरीबिच पटकपटक ठेलमठेल हुँदा प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेर नेताहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ । प्रहरीले नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, सांसद् गंगा चौधरी, हिसिला यमी, परशुराम तामाङ, रामकुमार शर्मा, सीपी गजुरेललगायत ५०/६० जना नेताकार्यकर्ताहरुलाई गरिफ्तार गरेको छ ।
गिरफ्तारलगत्तै पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो –‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरित संविधान मिचियो, दलीय चुनाव चिन्ह खोसियो, त्यसको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन सुरु भएको छ । जबसम्म यो सरकारले दलीय चुनाव चिन्ह दिंदैन र चुनावको वातावरण सुनिश्चित गर्दैन, त्यतिबेलासम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ । दलीय चुनाव चिन्ह पाउनु हाम्रो अधिकार हो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था जस्तो होइन यो, म आफैं जीवनभर बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति लडेको छु । बहुदलीय लोकतन्त्र भनेको चुनाव चिन्हसहित चुनाव लड्न पाउनु हो । त्यो अधिकारको जुन ढंगले हत्या गरिएको छ, जुन तीन दलीय सिन्डिकेट कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जारी गरेका छन्, हामी त्यसको विरोध गर्छौं र यसका विरुद्ध लड्छौं ।’
नयाँ शक्तिलगायतका दलीय चुनाव चिन्हबाट बञ्चीत दलहरुले काठमाडौंलगायत आज आइतबार देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरुमा धर्ना जारी राखेका छन् र भोलि सोमबार पनि धर्ना जारी रहनेछ ।